Ku Taqasuska Caafimaadka Dadweynaha (Public Health)
Taqasuskaan Caafimaadka Dadweynaha (Public Health) waxaa ku barandoontaa tilaabooyinka dowlada ay qaado ee dhanka caafimaadka; saameynta uu bulshada ku leedahay helitaanka ama helitaan-la’aanta daryeel caafimaad; wacyi galinta arimaha caafimaadka; maalgelinta dhinacyada kala duwan, sida ka hortagga cudurada faafa iyo daaweyntooda.
Waxaa kaloo ku barandoontaa taqasuskaan Caafimaadka Dadweynaha “epidemiology” oo ah cilmiga qaabilsan: faafidda iyo xakameynta cudurada, daawooyinka ka hortagga iyo anshaxa caafimaadka.
Ardayga ku taqasusa Caafimaadka Dadweynaha wuxuu xirfad u yeelanayaa qiimeynta iyo maaraynta mashruucyada wax ka qabta khatarta caafimaad ee bulshada soo foodsaara dhinaca cudurada faafa.
Ku Taqasuska Xiriirka Dadweynaha
Taqasuska Xiriirka Dadweynaha waxaa lagu bartaa diyaarinta war-gelinta, siinta qancin dadweynaha iyo diiri-gelinta wada shaqayn ee shirkat ama hay’ad, waxaana ardayga loo diyaariyaa ku shaqeynta xirfadaha qancinta iyo isweydaarsiga macluumaad.
Waxaa kale oo lagu bartaa taqasuskaan mabaadiida iyo farsamooyinka qancinta, qaabeynta fariimaha, xeeladaha suuq-geyn, habka wax u qorista heer sare, la hadlida warbaahinta iyo soo bandhigida.
Arday noocee barta taqasuska Xiriirka Dadweynaha?
Adkeesi u leh cadaadis
Raba inuu barto dhaqanka macaamiisha
U hadlikaro si taxadir ku jiro
U qaabilsane xiriirka dadweynaha waxaa shaqaaleesiiyo shirkadaha, hay’adaha ama shakhsiyaad bulshada magac ku leh ayagoo ilaaliya sumcada iyo sharafta shirkada ama hay’ada ku leedahay bulshada ee dhanka warbaahinta, waxay ku matalaan iyaga oo ka jawaaba wixii su’aalo kaga yimaado dhanka macaamiisha, warbaahinta, saamileyda, hay’adaha dowlada iwm.
Waxaa lagama maarmaan ah in shirkad kasta iyo hay’ad kastaba lahaato xafiiska xiriirka dadweynaha si ugu fududaato ku xirmida bulshada loo adeegayo.
Ku taqasuska Dhaqaalaha waa maxay?
Taqasuska Dhaqaalaha waxaa diirada lagu saaraa nidaamka Wax soo saarka, Kaydinta iyo Qoondaynta marka lagu jiro xaalad wax yaraan, waxaa ka loo soo raaca barashada qaabka hay’adaha u howlgalaan.
Waxyaabaha taqasuskaan lagu barto waxaa ku jira nidaam loogu talagalay sharaxaada aragtiyada Dhaqaale, sidoo kale waxaa qayb ka ah taqasuska dhaqaalaha lafagurida saameynta ay suuqa ku lee yihiin macaamiisha iyo shirkadaha, ujeedku waa in la fahmo geedi socodka go'aan qaadashada shirkadaha iyo qoysaska.
Waxaa ka loo lagu bartaa noocyada ifafaalayaasha dhaqaale sida, sicir bararka, heerka qiimaha, cabirida koritaanka dhaqaale dalka, dakhliga dalka, wax soo saarka gudaha iyo isbeddelada shaqo la'aanta.
Arday noocee barta taqasuska Dhaqaalaha?
Ardayga waa in uu jecel yahay soo jeedinta warbixin hadal ama qoraal, gaar ahaan bixin waraysi iyo soo bandhigida warbixin. Aradayga ku taqasusayo Dhaqaalaha waa in uu ahaadaa qof abaabulan, feejigan, dulqaad leh, daba taagnaansho leh iyo jecel xisaabta gaar ahaan mida tirikoobka.
Hoos waxaa ku xusan noocyada jagooyinka uu qaban karo ardayga dhameeya taqasuska Dhaqaalaha:
Saadaasha Suuqa ee Bangiyada
Doorashada Taqasus – Qayta 1aad ﻿
Maqaalkaan wuxuu ku siinayaa tilmaan iyo jiho ku saabsan sida loo xusho waxaad ku baran laheed jaamacadda – qaar ka mid ah tillaabooyinka aad u baahan tahay inaad qaadid, iyo u dhaqaaqida xagga ogaanshaha Taqasuska kugu haboon. Si aad u hubsatid waxaad sii saa waqti aad ku fikirtid intaadan go’aansan Taqasuskaaga, hana qalbi jabin hadii aadan wali ku fakirin waxaad ka baran laheed jaamacad, hadafku waa inaad soo koobto Taqasusyada jaamacadda aad xiisaynaysid dhiibto oo aad diirada saartid ugu badnaan sedex Taqasus, taas oo kuu fududeenayso inaad xog dheeri raadisid.
Waxaan ognahay ardayga markuu dugsi sare dhameeyo doorashada wuxuu ka baran lahaa Jaamacad waa uu ku jahwareeraa.
Jaamacaddaha badanaa waxay bixiyaan tobanaan taqasus, waxaa caqabad ku noqoto aradayga ka doorashada wuxuu baran lahaa, asagoo dareensan Taqasuska inuu noqonayo waxa uu ku shaqayn doono nolashiisa inta ka dhiman, waa go’aan weyn. Ardayga wuxuu ku bixinayaa waqti badan barashada maadooyinka taqasuska uu doortay, waxaa jira waxyaabo badan oo saameen ku leh qaadashada go’aan kan muhiimka ah.
Waa maxay Taqasus?
Waa waxbarshadaada tacliinta sare taas oo noqon doonta xirfada mustaqbalka aad ku shaqayn doontid.
Maqaalada soo socdo waxaan ugu hadli doonaa tilaabooyinka ardayga u bahan yahay inuu qaado siduu u doorto Taqasus ku haboon.